XOG Qarsoodi ah:- Kheyre iyo Beeshiisa oo isku haysta Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug “Nin la diyaariyay oo la wato…” | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa qorshaynaysa in gudoomiyaha Baarlamaaka Galmudug ay kadhigto yaxye Cali Ibraahim oo ah Saragaal sare oo katirsan Wasaaradda Arimaha gudaha Federaalka iyo dib uheshiisiinta ee Dowladda Soomaaliya islamarkaana ah Xubin Muhiim ah oo si dhow ula shaqeeya Raiisal wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Khayre .
ilawareedyo ka agdhow Xaafiiska raiisal wasaaraha Soomaaliya, Xassan Cali Khayre ayaa sheegaya in Mr yaxye lagu war galiyay in uu yareeyo dhaq dhaqaaqyada uu ku dhex leeyahay Gudiga doorashada Galmudug ee ay Dowladdu Magacowday si ay ugu suuragasho in uu isku soo taago xilka gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ay Dowlddu ladoonayso .
Balse Yaxye Cali ibraahim oo qudhiisu danaynaya booska ay Xukuumadda Khayre uwaddo ayaa bixinaya Dadaal badan oo uu kudoonayo in uu kudhex yeesho Gudiga doorashada Galmudug iyo Odayaasha Saxiixayaasha ee loo xil saaray in ay soo xulaan Xibnaha Cusub ee Baarlamaanka Galmudug.
Beesha Dagmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud oo quudaraynaysay in ay hesho xilkaasi ayaa ku gacan saray Damaca Dowladdu ku doonayso in ay booskaasi ku waydo Ruux ay isku beel yihiin Xassan Cali Khayre Waxayna sheegeen in aysan qayb ka ahayn howlaha ay Dowladdu kawado Magaalada Dhuusamareeb.
Xukuumadda Xassan Cali Khayre Raiisal Wasaaraha Soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixinaysa in ay gacanta kudhigto Madaxda Galmudug hogaamin doonta Sanadka 2019 si ay ugu suuragasho doonisteeda Doorashada Federaalka ee Sanadka 2021 . Balse waxay hadda wajahaysaa loolan adag oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan oo ay kamid yihiin Ahlusuna. qaybo badan oo kamida beelaha Galmudug . Musharaxiinta doonaya xilka Madaxwaynanimo ee Galmudug. siyaasiyiinta Mucaaradkaa iyo dhinacyo kale.
Previous articleDAAWO:- Somaliland oo ku Naxday Dagaalkii Xalay Coll.Caare uu ku qaaday Ceerigaabo “Hurdada ayuu naga jafay”.
Next articleDAAWO:- Wasiir Abgaal “Masiirka Puntland waxba uma dhimi Karo Oday meel ka hadlay iyo nin Xanaaqsan oo uu Maseer hayo”